Blox စျေး - အွန်လိုင်း CDT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Blox (CDT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Blox (CDT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Blox ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $4 043 886.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Blox တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Blox များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BloxCDT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0126BloxCDT သို့ ယူရိုEUR€0.0107BloxCDT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0096BloxCDT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0114BloxCDT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.112BloxCDT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0793BloxCDT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.278BloxCDT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0468BloxCDT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0166BloxCDT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0176BloxCDT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.279BloxCDT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0975BloxCDT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0675BloxCDT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.942BloxCDT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.12BloxCDT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0173BloxCDT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0193BloxCDT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.392BloxCDT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0874BloxCDT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.34BloxCDT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩14.93BloxCDT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.87BloxCDT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.923BloxCDT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.346
BloxCDT သို့ BitcoinBTC0.000001 BloxCDT သို့ EthereumETH0.00003 BloxCDT သို့ LitecoinLTC0.000231 BloxCDT သို့ DigitalCashDASH0.000139 BloxCDT သို့ MoneroXMR0.000141 BloxCDT သို့ NxtNXT0.981 BloxCDT သို့ Ethereum ClassicETC0.00185 BloxCDT သို့ DogecoinDOGE3.63 BloxCDT သို့ ZCashZEC0.000153 BloxCDT သို့ BitsharesBTS0.387 BloxCDT သို့ DigiByteDGB0.402 BloxCDT သို့ RippleXRP0.0447 BloxCDT သို့ BitcoinDarkBTCD0.000434 BloxCDT သို့ PeerCoinPPC0.0417 BloxCDT သို့ CraigsCoinCRAIG5.73 BloxCDT သို့ BitstakeXBS0.536 BloxCDT သို့ PayCoinXPY0.22 BloxCDT သို့ ProsperCoinPRC1.58 BloxCDT သို့ YbCoinYBC0.000007 BloxCDT သို့ DarkKushDANK4.04 BloxCDT သို့ GiveCoinGIVE27.24 BloxCDT သို့ KoboCoinKOBO2.87 BloxCDT သို့ DarkTokenDT0.0116 BloxCDT သို့ CETUS CoinCETI36.33